Counter Strike 1.6 အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်:
Counter-Strike 1.6 သည်စွန့်စားမှုနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အပြည့်ရှိသောကြောင့်စိမ်းလန်းသောကမ္ဘာပေါ်ရှိလူကြိုက်အများဆုံး၊ စိတ်အပန်းဖြေစရာနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် download လုပ်ရန်ဂိမ်းချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်း၏အိပ်မက်ဖြစ်သည် CS 1.6 သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာမှာအခမဲ့သုံးပြီးစစ်တိုက်ပါ။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်သောဖိုင်အမျိုးအစားမျိုးစုံနှင့်သင့်တော်သော website တစ်ခု CS 1.6 ၎င်းသည်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ သင်က counter strike action game 1.6 ကိုစိတ် ၀ င် စား၍ အခမဲ့ download ရယူလိုလျှင်၊ သင်သည်နေရာမှန်၌ရှိနေသည်။ အခမဲ့ download ရယူရန်သင်ဤသို့သွားရန်မလိုပါ CS 1.6မရ။ ငါတို့ကမင်းကို download လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတွေပေးထားတယ် CS 1.6 အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဤ site ၌သင် Counter-Strike 1.6 ဗားရှင်းအားလုံးကိုအခမဲ့ download လုပ်နိုင်သည်။ ဟုတ်သည်၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကိုသင် download လုပ်ရန်သာလိုအပ်သည် CS 1.6 အထက်ပါ download ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် setup ကို ၀ ယ်ရန်မည်သည့်ငွေမှမသုံးဘဲဂိမ်းကိုပျော်ရွှင်စွာကစားပါ CS 1.6 ဒါမှမဟုတ် multiplayer ကစားပါ။ CS 1.6 download အခမဲ့ရနိုင်သောအခြား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုသင်တွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အများစုသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော junk ဖိုင်များနှင့်အတူဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းများရှိသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင် CS 1.6 မူရင်းဗားရှင်းနှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။ ထို့ပြင်ငါတို့သည်မလိုအပ်သောဖိုင်များကိုဖယ်ရှားပြီးမင်းအတွက်လွယ်ကူစေရန် CS 1.6 ၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချထားသောကြောင့်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဂိမ်းကိုထိခိုက်စေမည့်အပိုဖိုင်လ်များနှင့်ဆော့ဝဲများမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အခွင့်အလမ်းကိုသာပေးသည် CS 1.6 Counter Strike 1.6 အကြောင်းဤကစားနည်းတွင်ကစားသမားသစ်များ (သို့) လူသစ်များအားလမ်းညွှန်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအခမဲ့ပေးသည်။ သင် download လုပ်နိုင်ရန် csdownload.net၊ ငါတို့အတွက် webpage တစ်ခုကိုငါတို့ဖန်တီးပြီးပြီ CS 1.6 ကစားပွဲကိုသင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့လွယ်လွယ်ကူကူ download လုပ်ပုံ၊ ၎င်းကိုမည်သို့ထည့်သွင်းပုံ၊ မည်သို့ကစားရမည်ကိုလေ့လာပါ CS 1.6.
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခမဲ့နှင့်ရေနွေးငွေ့မဟုတ်သောဗားရှင်းကိုပေးသည် CS 1.6 အလွန်မြန်သော download speed၊ နောက်ဆုံးပေါ် compression နှင့် implantation algorithms ပါသော download သင် download လုပ်ပြီး install လုပ်နိုင်လိမ့်မည် CS 1.6 ဤ web page တွင်မည်သည့် bug များ၊ bug များသို့မဟုတ် game crushes မပါဘဲ Windows (XP, 7, 8, 8.1, 10) အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာစွမ်းဆောင်နိုင်သောဗားရှင်းများနှင့်ထုတ်ဝေမှုအားလုံး
Counter Strike 1.6 ကိုအခမဲ့ download ရယူရန်။
Counter Strike 1.6 game ကိုအခမဲ့ download ချင်လျှင်မည်သို့ download ရမည်ကိုမသိပါ CS 1.6 မင်းရဲ့ PC မှာမင်းအဲဒါကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဆိုတာထက်ငါတို့ကမင်းကိုကူညီဖို့ဒီမှာရှိတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခမဲ့ download ၏ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကိုပေးသည် CS 1.6 ဂိမ်း။ ကျွန်ုပ်တို့မှအလုပ်လုပ်နိုင်သော download link တစ်ခုကိုသင့်အားပေးထားသည် CS 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှ၎င်းကိုသင်ဤ site ပေါ်တွင် download လုပ်နိုင်သည်။ download လုပ်ရန်အတွက် download လုပ်ပါ CS 1.6သင်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူသောအဆင့်အနည်းငယ်ကိုလိုက်နာရန်သာလိုသည်။ အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင်နားလည်နိုင်ရန်အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုသေချာဖတ်ပါ CS 1.6
အပေါ်ကပေးထားသော Counter-Strike 1.6 အခမဲ့ download ခလုတ်ကိုအခမဲ့နှိပ်ပါ
ထို့နောက်သင် setting ကိုသိမ်းလိုသောသင်၏ကွန်ပျူတာရှိတည်နေရာကိုရွေးပါ CS 1.6 مجانا
ဒေါင်းလုပ်ယူရလိမ့်မယ် CS 1.6 website မှသင်၏ကွန်ပျူတာသို့မိနစ်အနည်းငယ် download speed သည် internet speed ပေါ်မူတည်သည်။
setup file ကို download ပြီးသွားတဲ့အခါ CS 1.6-သင် setup ကို download လုပ်ထားသော folder သို့သွားပါ
setup file ကိုနှိပ်ပါ CS 1.6 ၎င်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်တယ် CS 1.6 အောင်မြင်စွာအခမဲ့။ ယခု၎င်းကိုဖွင့်ပြီးဂိမ်းကိုခံစားပါ။
အရင်တုန်းကလူတွေဒေါင်းလုပ်ဆွဲဖို့ပိုက်ဆံပေးရတယ် Counter-Strike ယခုမူချွင်းချက်မရှိဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကအခမဲ့ကမ်းလှမ်းတယ် CS 1.6 ဒေါင်းလုပ်; ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပထမ ဦး ဆုံးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းအမျိုးအစား၏ဗားရှင်းများနှင့်ထုတ်ဝေမှုအားလုံးကိုသင်အလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်သည်။ သင်ဟာ Counter-Strike 1.6 CSGO Edition, Counter-Strike: Halloween Mode အပါအ ၀ င်ကွဲပြားတဲ့ဗားရှင်းတွေကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်။ CS 1.6 မူရင်း၊ CS 1.6: PROCS RAR ဗားရှင်း၊ CS 1.6XTCS ဗားရှင်း၊ Counter-Strike 1.6 Modern Mode (သို့) အခြားမည်သည့်ဗားရှင်း (သို့) ထုတ်ဝေမှုမဆိုဤစာမျက်နှာတွင်အခြားမည်သည့်အကန့်အသတ်နှင့်အဆင်မပြေမှုမှမပါဘဲ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်ဗားရှင်းကိုမဆို download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ CS 1.6 မင်းရဲ့ PC မှာဂိမ်းတစ်ခုရဖို့ script များနှင့် malicious files များမှအခိုင်အမာအကာအကွယ်ဖြင့်အခမဲ့ download လုပ်ချင်သောအခမဲ့။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံး Operating System CS 1.6 အခမဲ့
Counter-Strike (ဗားရှင်းတိုင်း)CS 1.6 Warzone CS 1.6 မူလ XTCS, CS: GO mod, source edition စသည်) window 95, window 98, window 2000, window 7, window 8, window 8.1, window XP, window 10 စသည့် Microsoft version အားလုံးနှင့်တွက်ချက်နိုင်သည်။ သင်သည် Window မှလွဲ၍ မည်သည့် operating system ကိုမဆိုသုံးနေလျှင်၊ ဂိမ်းကိုခံစားရန် Microsoft windows သို့ပြောင်းရန်နှင့်ကစားနေစဉ်မည်သည့်အမှားသို့မဟုတ်အနှောင့်အယှက်ကိုမဆိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ သင့်ကွန်ပျူတာမှာ Microsoft operating system ရှိနေပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မစောင့်ပါနဲ့၊ Counter-Strike 1.6 ကိုငါတို့ website မှာအခမဲ့ download လုပ်ပြီးမင်းရဲ့ CS: 1.6 free download ကိုရယူပါ။
အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးကစားရန်အနည်းဆုံးစနစ်လိုအပ်သည် CS 1.6:
သင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ရည်ရွယ်လျှင် CS 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှအခမဲ့၊ Counter Strike 1.6 ဂိမ်းကစားရန် PC မှအကြံပြုထားသောအနိမ့်ဆုံးစနစ်လိုအပ်ချက်များအကြောင်းသင်သိထားရမည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာစနစ်အားတင်ရန်တွက်ချက်နေသလား CS 1.6 မည်သည့်နှောင့်နှေးသို့မဟုတ်အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲဂိမ်းနှင့်ကစား? သင်ဤအကြောင်းမသိလျှင် Free Counter Strike 1.6 ဂိမ်းတပ်ဆင်ခြင်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များအနည်းဆုံးလိုအပ်သောကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ၎င်းသည် PC မှ high graphic card များနှင့်ထူးခြားသော specs များလိုအပ်သောလေးလံသော game မဟုတ်ပါ။ exe ဖိုင်ဆိုက်ကနေ CS 1.6 ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာ hard drive ၏ ၂၅၀ MB သာလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်ပြီး၎င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၌အခမဲ့ Counter Strike 250 ကို download လုပ်သောအခါသင်၏ကွန်ပျူတာ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိုးတက်မှုကိုမထိခိုက်စေပါ။ သို့သော်ဒေါင်းလုပ်မချမီအနည်းဆုံး PC လိုအပ်ချက်များကိုသိရန်အရေးကြီးသည် CS 1.6 အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကစားပြီးပြီဆိုရင် CS 1.6 သင်၏ကွန်ပျူတာ၌နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ၊ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၌အနည်းဆုံးလိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်များရှိထားပြီး ဖြစ်၍ သင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်အခက်အခဲရှိနေသည်။ CS 1.6 သင်၏ကွန်ပျူတာသည်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်ကိုသိရှိနိုင်ရန်အောက်ပါလိုအပ်ချက်များကိုစစ်ဆေးသင့်သည် CS 1.6 ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ။ အတွက်အနည်းဆုံးကွန်ပျူတာသတ်မှတ်ချက်များ CS 1.6 ၎င်းတို့မှာ CPU - 0.8 GHz, အခမဲ့ Hard Disk - 650 MB, Random Access Memory (RAM) - 128 MB ဖြစ်သည်။
Counter-Strike 1.6 အတွက်အကြံပြုထားသည့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
ဂိမ်းတွင်ပျော်မွေ့ရန်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင် 512MB RAM (သို့) ထိုထက်ပိုရမည်။
သင့်ကွန်ပျူတာ၌အနည်းဆုံး 750 MB hard disk ရှိရမည်
ဗွီဒီယိုကဒ်ဟာသင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ 128MB ဖြစ်ရမယ်
လည်ပတ်ရန်သင့်တွင် mouse နှင့် keyboard ရှိရမည် CS 1.6သို့သော်မိုက်ကရိုဖုန်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်
အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရနိုင်ဖို့အတွက်ပါ CS 1.6သင့်တွင် Microsoft Windows operating system တစ်ခုခုရှိရမည်။
Counter-Strike 1.6 ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအဘယ်ကြောင့် download လုပ်သင့်သနည်း။
ပထမဆုံးဖြန့်ချိခဲ့စဉ်က၎င်းသည် download မဟုတ်ပါ CS 1.6 လူအများအားအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်၊ သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ developer များစတင်လာသည် Counter-Strike 1.6 အခမဲ့ setup file ကိုတီထွင်ရာတွင် Steam 1.6 game ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းယခုအခါအခမဲ့ download ရယူနိုင်သော site များစွာကိုသင်တွေ့နိုင်သည် CS 1.6 ဂိမ်း။ CS game ချစ်သူများအတွက် download လုပ်နိုင်သော website တစ်ခုကိုရှာရန်မှာခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည် Counter-Strike 1.6 မည်သည့်အန္တရာယ်ရှိသောဗိုင်းရပ်စ်၊ ဖိုင်များ၊ လင့်ခ်များ၊ ကြော်ငြာများသို့မဟုတ်အခြားမလိုအပ်သောဖိုင်များမပါဘဲအခမဲ့အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ Counter-Strike 1.6 ကို download ဆွဲရန်ပြီးပြည့်စုံသော webpage ကိုသင်ရှာရပါမည်။ Counter-Strike 1.6 ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သော site အများစုသည်ဂိမ်း၏တိုးတက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေရုံသာမကမလိုအပ်သောဖိုင်အမျိုးအစားများအားလုံးရှိသည်။ CS 1.6 ဒါပေမယ့်လည်းမကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောင့်မင်းရဲ့ system ကိုထိခိုက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွင် https://csdownload.netနောက်ဆုံးပေါ် CS setup file 1.6 free download ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ link ပေးထားပါတယ် CS 1.6 သင်၏အကာအကွယ်သည်အလွန်ဆိုးဝါးသောဖိုင်အားလုံးမှကင်းလွတ်သောသင်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်ကိုအကာအကွယ်ပေးထားသည် CS 1.6 ကျွန်ုပ်တို့၏ website csdownload.net မှလူသိများသောနှေးကွေးသော hack နည်းလမ်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ website မှသင် download လုပ်နိုင်သည် CS 1.6 မကောင်းသောဖိုင်များနှင့်ဇာတ်လမ်းများမှခိုင်မာသောကာကွယ်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာမှ Counter Strike Strike ကို download လုပ်ပါကမည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်မှမကူးစက်နိုင်ပါ။
ထို့ပြင်သင်ထုတ်ဝေသောအဟောင်းနှင့်အသစ်ထုတ်ဝေမှုအားလုံးကိုသင် download လုပ်နိုင်သည် Counter-Strike 1.6 ဒီ site ကနေ New Counter-Strike Edition 1.6 XTCS Version, Counter-Strike 1.6: Original Version, Counter-Strike 1.6 PROCS Version, CS: GO Edition စသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီဆိုဒ်မှာအဆင်ပြေတဲ့လင့်ခ်တွေကိုသင်လွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားပါက download လုပ်ပါ CS 1.6 မင်းဘယ်သူ့ကိုစောင့်နေတာလဲ။ CS Download Free ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ သင်၏ဂိမ်းကို download လုပ်ပြီးသူငယ်ချင်းများနှင့်သူစိမ်းများနှင့်ကစားခြင်းကိုပျော်မွေ့ပါ။
CS 1.6 သည် CS ဂိမ်းများကိုအဘယ်ကြောင့်လူကြိုက်အများဆုံး download လုပ်တာလဲသိလား။
ကူးပါ CS 1.6 Counter-Strike သည်များစွာသောဆွဲဆောင်မှုလက္ခဏာများနှင့်အသွင်အပြင်များပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းသည်ယခင်ဗားရှင်းထက်ထူးခြားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်စေသည် Counter-Strikeမရ။ ဤဗားရှင်းကိုတီထွင်ခဲ့သည် Counter-Strike အထူးသဖြင့်ကစားသမားများ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်အများပြည်သူအတွက်ပရိုဂရမ်မာများ Counter Strike တွင် multiplayer နှင့် single player modes နှစ်ခုလုံးရှိသည်။ developer များကနည်းဗျူဟာဒိုင်းလွှား၊ crosshair ပါသောစနိုက်ပါနှင့်နောက်ခံအချက်အလတ်များပါ ၀ င်သောဗားရှင်းအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကစားသမားများသည်ဓား၊ သေနတ်များ၊ ကိုယ်ထည်သံချပ်ကာများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ၊ စက်သေနတ်များနှင့်ဗုံးရှင်းလင်းရေးပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်ကွဲပြားခြားနားသောအသစ်လက်နက်များကိုဗားရှင်းအသစ်တွင်ရနိုင်သည်။ CS 1.6မရ။ ကစားသမားများသည်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်း၏လိုအပ်ချက်များအတိုင်းလက်နက်များ ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်ငွေရှာနိုင်သည်။ ဤလက်နက်များသည်တကယ့်စစ်ပွဲတစ်ခုတွင်သုံးသောတကယ့်လက်နက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤလက်နက်များသည်အသံအေးပြီးကစားသမားများကိုဆွဲဆောင်သည်။
Counter-Strike ၏ဗားရှင်းအသစ်များတွင်အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်များ၊ ပုံစံကောင်း၊ dynamic textures နှင့်အသံများပါ ၀ င်သည်။ မြေပုံများကိုပြုပြင်ထားပါသည် CS 1.6 အခြားမည်သည့်ဗားရှင်းထက်မဆိုသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ၊ ဆေးများ CS 1.6 ၎င်းသည်လေးလံသောကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုမလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များပါ ၀ င်သောမည်သည့်ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့်မဆိုဂိမ်းကိုအလွယ်တကူကစားနိုင်သည်။ ၎င်းအပြင်၎င်းသည် Microsoft Windows ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
ဒါ့အပြင်အဲဒါဖြစ်လာတယ် Counter-Strike ၎င်းသည်၎င်းတို့အားနေ့စဉ်ဘ ၀ ၌သူတို့၏ပြဿနာများကိုမေ့ပျောက်စေပြီးသူတို့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများမှဂိမ်းကမ္ဘာ၏မတူကွဲပြားမှုသို့လမ်းကြောင်းပြောင်းစေသောကြောင့်၎င်းသည်လည်းလူကြိုက်များသည်။ ကူညီပြီး download လုပ်ပြီး run လိုက်ပါ CS 1.6 သူငယ်ချင်းများနှင့်အမည်မသိလူတို့နှင့်အတူအပျက်သဘောထားများကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်လူတို့အားဖျော်ဖြေရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးပါ။ အရည်အသွေးမြင့်ဘာသာပြန်နှင့်စကားပြောဂိမ်းသည်ကစားသမားများအားဒဏ္legendaryာရီစီးပွားရေး၏အင်္ဂါရပ်များကိုခံစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။
ထို့ကြောင့်၎င်း၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောလက္ခဏာများကြောင့် CS သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကျော်ကြားမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးလူများသည်သူတို့၏အားလပ်ချိန်၌ဤဂိမ်းကိုကစားရန်နှစ်သက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံခြုံစိတ်ချရသော download link ကိုပေးအပ်ခြင်းဖြင့်သင့်ကိုကူညီရန်ဤတွင်ရှိသည် CS 1.6 အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဒီမှာသင်လုပ်နိုင် ဒေါင်းလုပ် တန်ပြန်သပိတ်မှောက် 1.6 مجانا
ဤစာမျက်နှာတွင်သင်လုပ်နိုင်သည် ဒေါင်းလုပ် CS 1.6 လွှတ်ပေး ပြည့်စုံ တပ်ဆင်ခြင်း ။ ရရှိနိုင်သောဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည် XTCS ကောင်တာ -သပိတ်မှောက် 1.6 ကူးပါ مجاناမရ။ XTCS 1.6 Final Version 2011 သည် Counter-Strike 1.6 ၏နောက်ဆုံးနှင့်အကြီးကျယ်ဆုံးဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဗားရှင်းအသစ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံများပါ ၀ င်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်များကြောင့်ဂိမ်းသည်ယခင်ဗားရှင်းများထက်များစွာပိုမိုကောင်းမွန်သည် CS 1.6မရ။ ဒီဂိမ်းက Windows (operating system) တစ်ခုအတွက်ပါ။ အရေးကြီးဆုံးအရာသည် Windows ဗားရှင်းအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Counter Strike သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးသေနတ်ပစ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ CS တွင်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောမြေပုံများနှင့်ဂရပ်ဖစ်များရှိသည်။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းအွန်လိုင်းပေါ်မှလူသိအများဆုံးသေနတ်သမားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ပဲ ထိခိုက်မှုတစ်ခု ကောင်တာ မဟုတ်ဘူး နှုန်းထားများ ဒေါင်းလုပ် ရေနွေးငွေ့ မြင့်မားနေဆဲ
ဤနေရာတွင် setup file 1 ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် link တစ်ခုတွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ PC အတွက်တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွင်မည်သည့်မြေပုံ၊ အသံနှင့်အခြားအပိုတပ်ဆင်မှုများမပါ ၀ င်ပါ။
သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒေါင်းလုပ် တန်ပြန်သပိတ်မှောက် ၁/၆ အခမဲ့ ဤလွယ်ကူသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာတွင်ကောင်တာခလုတ်တစ်ခုရှိသည် သပိတ်မှောက်6download مجاني
انقرفوق ဒေါင်းလုပ် cs6၏ download လုပ်ပါ
ကြာလိမ့်မယ် ဒေါင်းလုပ် ထိခိုက်မှုတစ်ခု ကောင်တာသည် setup ဖိုင်ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာထဲတွင်သိမ်းဆည်းသည်အထိမိနစ်အနည်းငယ်သာ (သင့်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းပေါ်မူတည်) ။
Install (setup) ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး Anti-Strike6ကိုအပြည့်အစုံ install လုပ်ပါ
တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါသင်၏စားပွဲခုံပေါ်မှ counter strike game shortcut ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး cs6ကိုစတင်ကစားပါ
မှတ်ချက်။ ။ CS installation ဖိုင်ဖြင့်အတူသင်၏ browser ထဲတွင်အတူတကွဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းထားသောအပိုပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ် application မရှိပါ။ ဤသည်သည်အခြားမဖြစ်နိုင်ချေသောအသုံးချပရိုဂရမ်များမရှိသောရိုးရိုးတိုက်ရိုက် download link ဖြစ်သည်။
Counterstrike 1.6 setup file ကိုဂိမ်းပြုပြင်မွမ်းမံမှုများမှကာကွယ်ရန်၊ ဂိမ်းတစ်ခု၏ဆာဗာများကိုရှာဖွေရန်အတွက် singleplayer game mode အတွက် bot (player နှင့် CPU) ရှိသည်။ ကောင်တာ သပိတ်မှောက် ဒေါင်းလုပ် Windows 10 ၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့် CS 1.6 ဗားရှင်းဖြစ်ပြီးဆိုလိုသည်မှာအမှားအယွင်းများ (သို့) အမှားအယွင်းများမရှိပါ။
မှတ်စု: သင်ကူးယူနိုင်သည် တန်ပြန်သပိတ်မှောက် 1.6 ဒေါင်းလုပ် PC များအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ မင်းမှာဂိမ်း၏မူလမိတ္တူကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဒီမိတ္တူကတော့မဟုတ်ဘူး ရေနွေးငွေ့ download ကိုနှိပ်ပါ ကောင်တာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်အတွက်သာ။ မဟုတ်ရင်လဲလှယ်ပါ တိုက်ခိုက်ရေး သပိတ်မှောက် ဒေါင်းလုပ် ပစ္စည်းအတွက် ကွန်ပျူတာ အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မမှန်ကန်ပါ။
၏ ဂိမ်း- သဟဇာတဖြစ်သောကွန်ပျူတာစနစ်လိုအပ်ချက်ရှိရန်အကြံပြုသည်။ အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးအကြံပြုထားသောစနစ်များမှာ Windows 10၊ Windows 8 သို့မဟုတ် 8.1, 7, XP, 2000, ME, 98, 95 တို့ဖြစ်သည် ထိခိုက်မှုတစ်ခု ကောင်တာ ဒေါင်းလုပ် ဂိမ်း ပြည့်စုံ သငျသညျအလွယ်တကူသူတို့အပေါ်မှာ operating ပါလိမ့်မယ်။
CS installation အတွက်အခြားအရေးကြီးသော OS လိုအပ်ချက်များ -
ဗွီဒီယိုကဒ် 128 MB သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသည်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Windows OS ဗားရှင်း ၁၀၊ ၈၊ ၇၊ Vista၊ XP၊ ၂၀၀၀၊ ၉၅ ။
Mouse နှင့် Keyboard ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်မိုက်ကရိုဖုန်းတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
အဆိုပါ hit စီးရီးအကြောင်း ဆန့်ကျင်
ဒီအပိုဒ်မှာတော့ CS History အကြောင်းပြောမယ်။ Counter-Strike သည်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုမှလူတစ် ဦး ၏သေနတ်ပစ်ဂိမ်းဖြစ်ပြီးမူလက Minh "Gooseman" Lu နှင့် Jess Cliff တို့၏ Half-Life ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် Counter-Strike အား Microsoft Windows platform တွင် Valve မှဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ။ မကြာခင်မှာပဲဂိမ်းဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလူကြိုက်အများဆုံးသေနတ်သမားများထဲကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပထမ ဦး စွာဤသည်သည်မြန်ဆန်သောအွန်လိုင်းနှင့်အသင်းကို ဦး တည်သည့်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ကစားသမားများသည်အကြမ်းဖက်သမားများသို့မဟုတ်တန်ပြန်သူများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အသင်းနှစ်သင်းသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အနိုင်မရလျှင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆန့်ကျင်။ ကစားသည် ရန်သူအသင်းသားအားလုံးကိုသတ်ပစ်နိုင်သည့်အဖွဲ့သည်အနိုင်ရသူဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ Counterstrike တွင်ကစားရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများရှိသည်။ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဓားစာခံကယ်ဆယ်ခြင်းနှင့်ငြင်းဆန်ခြင်းဗုံး။
ထို့ပြင်ဂိမ်းတွင်ဥပမာမြို့ပြ၊ အာတိတ်၊ တောနက်နှင့်သဲကန္တာရကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ကွဲပြားသောမြေပုံများစွာရှိသည်။ ဒါကကစားသမားတွေကိုသူတို့ကစားချင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကိုရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတယ်။ သို့သော်လွှတ်ပေးပြီးကတည်းကဖြစ်သည် Counter-Strike 1.6 ဂိမ်းမှမြေပုံများကိုပေါင်းထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းမရှိပါ။
ကစားသမားသည်ဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လက်နက်အမျိုးမျိုးမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကစားသမားများသည်ဓားများ၊ သေနတ်များနှင့်စက်သေနတ်များမှအမျိုးမျိုးသောလက်နက်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ လက်နက်တစ်ခုရွေးချယ်ရာတွင်ကစားသမားသည်လက်နက်များမည်မျှကျေနပ်အားရကြောင်းပြန်လည်စဉ်းစားရမည်။ လက်နက်ရွေးချယ်ရန်အခြားအကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းသည်ကြည့်ကောင်းသည် (သို့) အေးလွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားစံသတ်မှတ်ချက်များမှာစစ်မှန်သောတိုက်ခိုက်ရေးအခြေအနေတွင်သင်မည်သည့်လက်နက်များအသုံးပြုမည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်သရုပ်မှန်ဖြစ်သည်။
အကြောင်း CS 1.6
Counter-Strike 1.6 ဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Counter-Strike ၁.၆ သည်ဂိမ်း၏အဓိကအကြောင်းအရာ update ဖြစ်ပြီးဗားရှင်းနံပါတ်သည်အလွန်လူကြိုက်များပြီးမူလဂိမ်းကိုကျန်အပိုင်းများနှင့်ကွဲပြားစေရန်အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဒီမှာ သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ် ဒေါင်းလုပ် ပြင်ဆင်ပါ لعبة ၏ ပြီးတော့ဂိမ်းကိုသင့်ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ပါ။
အခုအချိန်မှာ CS 1.6 ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် CS ဂိမ်း၏အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ကွဲပြားသောနိုင်ငံများမှလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယခုလူများသည်ဤဂိမ်း၏ပြိုင်ပွဲများကိုစီစဉ်သည်။ သင်ဒီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် https://www.game.tv/find-tournaments/-counter-strike-1.6-tournaments
ငှားရမ်းပြီးပါပြီ Counter-Strike 1.6 ၂၀၀၃ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်တွင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဤဂိမ်းဗားရှင်းတွင်အဟောင်းများမှလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များစွာရှိသည်။
Zoom and Health ကို HLTV တွင်ထည့်သွင်းထားသည်
တိုးတက်လာသော settings နှင့် navigation control
Counter-Strike 1.6 သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးသေနတ်သမားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်မတူညီသော mods များနှင့် version အသစ်များရှိသည်။ ဂိမ်းဂရပ်ဖစ်၊ ချို့ယွင်းချက်များနှင့်အခြားဒြပ်စင်များကိုလူကြိုက်များမှုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အဆင့်မြှင့်ထားသောဗားရှင်းများအားပုံမှန်တီထွင်ထုတ်လုပ်သည်။
ဂိမ်းကတကယ်ကိုဟောင်းနွမ်းနေပေမယ့်လူကြိုက်များမှုဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်မားနေပါတယ်။ လူများသည်ဗားရှင်းအသစ်သာမကသာမကဆက်လက် download ပြုလုပ်နေကြသည် CS ဒေါင်းလုပ် ဖိုင်များဒါပေမယ့်လည်းအဟောင်းတွေပါဘဲ။ CS 1.6 ကစားပွဲတစ်ခုပါပဲ CS လူကြိုက်အများဆုံး Download ။ ဒီမှာသင်လုပ်နိုင် ဒေါင်းလုပ် ကောင်တာ သပိတ်မှောက် ရေနွေးငွေ့ ဒေါင်းလုပ် مجاني ။ သင်ထိုသို့မပြုလုပ်သေးပါက၊ အထက်ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ဤနေရာတွင်သင်သည်နောက်ဆုံးပေါ် XTCS Counter Strike 1.6 နောက်ဆုံးဗားရှင်းတစ်ခုကို download လုပ်ယူနိုင်သည်။
ခင်ဗျားဖတ်နိုင်တယ် ဒေါင်းလုပ် ထိခိုက်မှုတစ်ခု ကောင်တာ 1.6 ကူးပါ အကောင်းဆုံး အခမဲ့ ဤနေရာတွင်ဖိုင်ဖော်ပြချက်
ဂိမ်းခေါင်းစဉ်: XTCS Counter Strike 1.6 နောက်ဆုံးဗားရှင်း ၂၀၁၁
စာရေးသူ - Valve Software ကို XTCS အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပါသည်
ထုတ်ဝေရေးအဖွဲ့ - XTCS အဖွဲ့
ဂိမ်းမုဒ်များ: ကွန်ယက် (အင်တာနက်၊ ဒေသတွင်းကွန်ယက်၊ ဘက်လိုက်မှုတစ်ခု)
ထောက်ပံ့ထားသော OS: Windows Vista / XP / 7/8 / 8.1 / 10
တန် Strike 1.6 ဒေါင်းလုပ် လွှတ်ပေး ပြည့်စုံ ပုံမှန်မြေပုံများ၊ အသံများနှင့်မော်ဒယ်များသည်ဂိမ်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အသစ်ထည့်သွင်းထားသောသို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသောအသံသို့မဟုတ်မြေပုံအသစ်များမရှိပါ ဖိုင်ကို install လုပ်ပါ ဒေါင်းလုပ် အခမဲ့ ဒါ Counter-Strike mode ဗားရှင်းများကိုဤနေရာမှလည်းကူးယူနိုင်သည် https://csdownload.net/counter-strike-1-6-indir/
အကယ်၍ သင်မြေပုံများ၊ အသံများ၊ ဂရပ်ဖစ်များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းအင်္ဂါရပ်များကိုပြုပြင်လိုပါကသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီတိကျသောလိုအပ်သည့်မြေပုံများ၊
Counter-Strike 1.6: XTCS ဗားရှင်းအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်:
Counter-Strike 1.6: XTCS, Xtreme Counter-Strike 1.6 သည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်။ CS 1.6မရ။ ဒါကအံ့သြဖွယ်ဗားရှင်းပါ CS 1.6 ပို၍ လက်တွေ့ကျသောဂရပ်ဖစ်များ၊ အသံများ၊ လက်နက်များ၊ အရာဝတ္ထုများ၊ ပိုကောင်းသောပုံစံငယ်များနှင့်အခြားအဖိုးတန်အပ်ဒိတ်များစွာပါ ၀ င်သည်။
XTCS Counter-Strike 1.6 ကိုအခမဲ့ download လုပ်ချင်လျှင် XTCS Free Download ကိုနှိပ်ပါ CS 1.6 အထက် XTCS Counter Free Setup 1.6 တွင် FPS configuration နှင့်နောက်ဆုံး build version တို့ပါ ၀ င်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်း CS 1.6: XTCS သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏အကောင်းဆုံး gaming အတွေ့အကြုံကိုအာမခံသည်။
XTCS အက္ခရာများ Counter-Strike 1.6 နောက်ဆုံးဗားရှင်း -
Dual Protocol Client (၄၈ + ၄၇)
နောက်ဆုံးပေါ် sXe antiheat ထိုးဆေးနှင့်လိုက်ဖက်သည်
နောက်ဆုံးပေါ် bios များပါဝင်သည် CS 1.6
الإنةجةلةيأوبانلبانبياانوالوالبل Wallb ة gh ة r ကိုةဝေါ့شي sik ةة Waldnmark كة Wal أ lmani ةအမှတ်တရه nl ةကြိမ်မြောက်ةဎ Wallf نل nl ةကြိမ်မြောက်ة Walf ة nn ة se အမှတ်တရيون niani ة Wallmj ة r ကိုةဎإ Valm ة t ကိုةဎإ Val إ Tal w ةဎة Vall ن t ကိုةဎةن Waln روي rwij ة Wallb ةဌةကြိမ်မြောက်ةဎ Walb ة rtag ةဎرو Wallr روမီတာكဎة Walr ك ld ة w ةနှင်းလျှောစီးةဎة Wald ة s ကိုةဎةဌة w ةةဎة။
လက်၏ပုံသဏ္andာန်နှင့် texture ကိုပြောင်းလဲပါ
Anti-slowhack tool တစ်ခုပါရှိသည်
အွန်လိုင်းနှင့် LAN ကိုဖွင့်နိုင်သည်
100% Steam GCFs (ဂိမ်း cache ဖိုင်များ) မှသန့်ရှင်းစင်ကြယ်
ဆာဗာနားထောင်ခြင်းကို LAN စနစ်ဖြင့်ဖွင့်ရန် option ထပ်ထည့်ထားသည်
Counter Strike ၁.၆ မြေပုံများထပ်မံပေါင်းထည့်ပါ
စစ်ဇုန်ကို download လုပ်ပါ
Counter Strike 1.6: Warzone ကိုနိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၁၃ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် Counter-Strike ၎င်းသည်အခြားဗားရှင်းများနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည် Counter-Strike 1.6မရ။ CS: warzone ၏အခြေခံသဘောတရားရှိသည် CS 1.6 ဒါပေမယ့်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ resolution နဲ့ဂရပ်ဖစ်တွေနဲ့။ ၎င်းသည်အပိုဆောင်းစစ်တပ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုနှင့်အနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသည်။ ဖြန့်ချိပြီးကတည်းကလူတွေကသေနတ်သမားကစားရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ် CS 1.6 Warzone ။ Counter-Strike 1.6 Warzone ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ website csdownload.net စာမျက်နှာ၌ဖော်ပြထားသည့် link ဖြင့် download လုပ်နိုင်ပါသည်။ Free Download ကိုနှိပ်ပါ CS 1.6 warzone free ကိုနှိပ်ပါ Warzone ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ CS 1.6 exe ဖိုင်ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါလိမ့်မည်။ Warzone ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပြီးပါ CS 1.6 မည်သည့်အမှားများ၊ ပြဿနာများမဆို၎င်းကိုသင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ လင့်မှကူးယူဖော်ပြသည် CS 1.6 Warzone Free သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ကြော်ငြာများ၊ ဂိမ်းကစားခြင်းများနှင့်အခြားဖျက်ထားသောအပလီကေးရှင်းများမှသင့်ကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
مي.ات CS 1.6စစ်ပွဲဇုန်
အွန်လိုင်း၊ LAN နှင့် BIOS များကစားနိုင်သည်။
အလုပ်တွေ Windows 7, 8, 10, XP, Vista;
client သည် P47 ဆာဗာများနှင့် P48 ကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်သည်။
setup အရွယ်အစား 177 MB
ORANGE BOX ဖြင့်ရေငွေ့မဟုတ်သော patch version 44;
နောက်ဆုံးဖြည့်စွက်ချက် CS 1.6 ခင်ဗျာ;
နောက်ဆုံးပေါ် AMX Mod X v1.8.2 ကိုပေါင်းစပ်ပါ။
Counter Strike ၁.၆ CSGO Edition
Counter Strike 1.6 CS: GO Mod အခမဲ့ရယူပါ။
Counter-Strike 1.6 CS: GO mod သည်ဂိမ်း၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည် CS 1.6 ဘယ်ကစားသမားတွေကနိုင်မလဲ CS 1.6 စမ်းသပ်မှု Counter-Strike: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိုးစစ်ကစား။ ဤအထူး mode သည် CS: GO နှင့်ဆင်တူပြီးအလုပ်လုပ်သည် Counter Strike 1.6မရ။ ၎င်းကိုဆင်တူပုံစံများ၊ မြေပုံများ၊ အသံများ၊ အရေခွံများ၊ spoilers များနှင့် textures များဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည် CS 1.6 CS: GO သည်ရှာဖွေရန်နှင့်အကဲဖြတ်ရန်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်သည်။
Free Counter-Strike 1.6 CS: GO Download ကိုသင့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာကိုတိုက်ရိုက်လင့်ခ်ဖြင့်ကူးယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ Download Counter-Strike 1.6 CS: GO ခလုတ်ကိုတွေ့နိုင်သည်ဆိုလျှင်၎င်းကို နှိပ်၍ ဂိမ်းကိုယနေ့အခမဲ့ရယူပါ။
Counter-Strike 1.6 CSGO အနိမ့်ဆုံးစနစ်လိုအပ်ချက်များကိုရယူပါ။
1 core နှင့်အတူ 1 CPU
ဗီဒီယို RAM 64MB
Disk သိုလှောင်မှုပမာဏ2GB
Counter Strike 1.6 CSGO ဂိမ်းအင်္ဂါရပ်များ:
ဤ Mod တွင်တင်းပလိတ်များပါ ၀ င်သည် CS 1.6 CS: GO နှင့်ဆင်တူသောတည်းဖြတ်သူ
ဤ mod တွင်ဂိမ်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိုးစစ်ဗားရှင်း၏တူညီသောအသံများရှိသည်။ ရေဒီယို၊ လက်နက်အသံ၊ အသံအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (မြေပုံအသံစသည်တို့)
CS: GO ဂီတကအစမှာကစားတယ်
ယခုထုတ်ဝေမှုတွင် CS: GO နှင့်ဆင်တူသည့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောပုံသွင်းထားသောမြေပုံပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ဂိမ်းတွင်ရှိသောမူလမြေပုံများအားလုံးသို့ဆင်းသက်လာသည် (de_dust2, de_inferno, cs_assault, etc)
ဂိမ်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲပြီး၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့် CS: GO ဗားရှင်းနှင့်ဆင်တူသည်
CS: GO Gun နဲ့ Ammo စျေးဝယ်စာရင်း
ဖိုင်အရွယ်အစားက 400 MB ဖြစ်တယ်။
ရက်စွဲ သပိတ်မှောက် ကောင်တာ:
Counter-Strike သည်သမိုင်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးသောပထမဆုံးလူတစ် ဦး သေနတ်ပစ်ပစ်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဂိမ်းကစားခြင်းတွင်ရှည်လျားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော၊ ထူးခြားသောသမိုင်းရှိသည်။ သင်အများစုသည်အချိန်တိုင်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးသောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Counter-Strike ၏သမိုင်းကြောင်းကိုမသိရှိကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကစားသမားတစ် ဦး အနေဖြင့် Counter-Strike ၏ဆင့်ကဲဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ သင်တစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်သိထားရပါမည်။ တစ်ခုတည်းသောကစားသမားကောင်းတစ်ခုသည်လူကြိုက်အများဆုံး၊ အကျယ်ပြန့်ဆုံး downloaded နှင့်အများဆုံးကစားသောဗွီဒီယိုဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုသို့လျင်မြန်စွာလှည့်ပတ်သွားသည်။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည်လင်ပြတ်သားစွာအချက်တစ်ခုကဂိမ်းကမ္ဘာမှာလွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အသကျရှငျဖြစ်လာမှတန်ပြန်သပိတ်မှောက် 17 သရုပ်ဆောင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကစားနည်းဟောင်းဖြစ်သော်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားများနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသောကစားသမားများသည်တန်ပြန်သပိတ်မှောက်မှုကိုခံစားနေဆဲဖြစ်သည်။
စတင်ပါ ဂိမ်း :
လွန်ခဲ့သော (၂၁) နှစ်ခန့်က (၁၉၉၉) ခုနှစ်တွင် Valve Cooperation သည်၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးဂိမ်းဖြစ်သော Half-Life ဟုခေါ်သောလူတစ် ဦး သေနတ်သမားဂိမ်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ Valve ကော်ပိုရေးရှင်းသည် Counterstrike ၏ ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာဂိမ်းကိုထုတ်ဝေသူဖြစ်သည်။ Sierra Studios မှ Half-Life ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးကြီးမားသော ၀ ါသနာပါသောကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားများကဂိမ်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ Counter-strike သည်လျင်မြန်စွာဂိမ်းကစားသူများကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များလာပြီးအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီးပရိုဂရမ်မာများသည်တစ် ဦး ချင်းစီကို mods များစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ကနေဒါပရိုဂရမ်မာမင်းလူးနှင့်သူ၏သူငယ်ချင်း Jess Cliff တို့သည် mod ၏ Half-Life, Counterstrike ၏ beta version ကိုဖန်တီးသည်။ သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးဝက်ဝက်ဘဝ beta ကိုတီထွင်ဖို့သူတို့ကိုတစ်လခွဲလောက်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်။
Min Lu နှင့် Jess Cliff တို့က Betas ကိုတီထွင်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး CS အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်းဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အစပိုင်းတွင် Counterstrike တွင်မြေပုံ (၄) ခုနှင့်လက်နက် (၉) ခုသာရှိသည်။ သို့သော်လူကြိုက်များသောနေရာမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ လူများသည်အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေး (သို့) အကြမ်းဖက်သမားများကိုရွေးချယ်သည့် ၅-၅ ကြိမ်တိုင်တိုင်ဆန္ဒပြပွဲများတွင်ပါဝင်လေ့ရှိပြီးထိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကိုယနေ့တိုင်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Counterstrike သည်ပိုမိုစိတ် ၀ င်စားလာပြီးနောက်ဆုံးတွင်လူများသည်ဂိမ်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။
Counterstrike ၏လူကြိုက်များမှုကြောင့်နှင့် community-mods များတည်ဆောက်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာတွင် video game developer Valve သည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်ပဉ္စမ beta ကိုဖြန့်ချိပြီးနောက် Lou နှင့် Cliff ကိုငှားရမ်းခဲ့သည်။ Valve သည် Counterstrike နှင့် programmer Minh Lu နှင့် Jess Cliff တို့နှင့်အတူစတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ အဆို့ရှင်။ ။ လွှတ်လိုက်ပါပြီ Counter-Strike ၂၀၀၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် PC အတွက်နောက်ဆုံး၌၎င်းသည်စီးရီး၏တရားဝင်စတင်ခြင်းဖြစ်သည် Counter-Strike .
ပထမဆုံးတရားဝင် Counterstrike ဖြန့်ချိခဲ့သည့်အတိုင်းလူကြိုက်များသောမြေပုံနှစ်ခုဖြစ်သော Assault (cs_assault) နှင့် Cobblestone (de_cabble) နှင့်မြေပေါ်တွင်သာကစားခဲ့သည်။ mod တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းမှာကြီးမားသောနောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုရှိခဲ့ပေမယ့်တရား ၀ င်တန်ပြန်တိုက်ပွဲများကိုကွန်ပျူတာသို့ကွန်ပျူတာဖြင့်ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်တွင်လူကြိုက်များမှုသည်လူအများကြားတွင်အများအပြားသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
Counterstrike အသိုင်းအဝိုင်းသည်ပိုများလာပြီးပိုကြီးလာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူများစွာသည်ဂိမ်းကစားရန်စတင်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကစားခဲ့သည်အဖြစ်ဒါဟာအတော်လေးလူကြိုက်များမြင့်တက်ခဲ့သည်။ Multiplayer မတိုင်မီကရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း Counterstrike သည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းများ (သို့) သူစိမ်းများနှင့်အတူဂိမ်းကစားရန်ကွန်ပျူတာရှေ့မှာနာရီပေါင်းများစွာကုန်လွန်ရန်မလိုအပ်ပါ။ လူတို့သည်ရရှိနိုင်သည့်အချိန်နှင့်အညီမိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်ကစားနိုင်သည်။ ဒါဟာထူးခြားတဲ့ဂိမ်းကြီးကစားရန်လွယ်ကူပေမယ့်မာစတာဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောစတိုင်နှင့်စိန်ခေါ်မှုသဘောသဘာဝကြောင့်ကစားသမားများကြားတွင်ရေပန်းစားသည်။ ၎င်းသည်လိုလားသူများမှပြုလုပ်သောဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစဉ်အဆက်ဖန်တီးခဲ့သော influ multipl ayer ayer the the most ayer သြဇာအရှိဆုံး multiplayer games တစ်ခုဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာတွင်တန်ပြန်ဆန့်ကျင်ရေးစက်ယန္တရားများစွာကိုအကောင်အထည်ဖော်နေသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဗားရှင်း နှင့်မွမ်းမံချက်များ တန်ပြန်သပိတ်:
မကြုံစဖူးသော CS မြင့်တက်မှုနှင့်လူများကိုဆွဲဆောင်ရန်အလားအလာသည် developer များအနေဖြင့်ဤဂိမ်းကိုလူအများစိတ်ဝင်စားစေရန်နှင့်ဆွဲဆောင်ရန်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ လူတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအတွေးအခေါ်တွေဖြစ်လာပြီးပရိုဂရမ်မာတွေကအတွေးအခေါ်တွေကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာတယ်။ Valve Corporation သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် Anti-Cheating System (VAC) ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤစနစ်သည်ခိုးရန်သို့မဟုတ်ခိုးယူရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ကစားသမားတစ် ဦး သည်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားလျှင်ချက်ချင်းပိတ်ပင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ Valve သည်အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်မြေပုံများနှင့်လက်နက်အသစ်များကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် Counter Strike ဗားရှင်း ၁.၁ တွင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Valve၊ Ritual Entertainment နှင့် Turtle Rock စတူဒီယိုများသည် Counterstrike: Condition Zero ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်တီထွင်ခဲ့ပြီး Sierra နှင့် Listen တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်တစ်ခုတည်းသော player နှင့် multiplayer feature များပါရှိသည် ပရိုဂရမ်မာများအနေဖြင့်“ Deleted Scenes” ဟုခေါ်သောအရေးကြီးသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။ သူတို့ကဂရပ်ဖစ်ကိုလည်းတိုးတက်စေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကမကောင်းဘူး။ ကစားသမားအများစုသည်၎င်းကိုထိုက်တန်စွာမတွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့် Counterstrike ဗားရှင်းအသစ်သို့ပြောင်းရန်စိတ်မဝင်စားကြပါ။ သူတို့ကဂိမ်းအသစ်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမပေးခဲ့ကြဘဲ Counterstrike ဟောင်း: Condition Zero ထက် Counterstrike ဟောင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Valve သည် Counterstrike: Source, Counter Strike: Global Offensive ကဲ့သို့သောတန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ထောင်နှင့်ချီသောမွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် Valve သည်ဂိမ်းကိုဒီနေ့အဖြစ်အပျက်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ Counterstrike မှာဆက်လက်လှုပ်ရှားနေပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ CS အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းသာမကကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်ရှည်လများအကြိုက်ဆုံးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဆန္ဒတွေအရဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ မူလ Counterstrike ပြီးနောက် ၂၁ နှစ်အကြာတွင်၎င်းသည်အသက်ရှင်ဆဲဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့သည် CS ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ အရာဝတ္ထုများအားလုံးတွင်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Counter Strike သည်သင်ယူရန်လွယ်ကူသော်လည်းကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။ နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်တီးခတ်ပေးမှာပါ။
Counterstrike ၁.၆ အကြောင်း
CS 1.6 ၎င်းသည်အက်ရှင်နှင့်စွန့်စားမှုအပြည့်ရှိသောဒဏ္legendaryာရီဆန်သောပထမဆုံးသေနတ်သမားဂိမ်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Counter-Strike ၏အကျော်ကြားဆုံးဗားရှင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် Valve Corporation မှတီထွင်ခဲ့ပြီး STEAM မှဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လူအများကြားတွင်လျင်မြန်စွာကျော်ကြားလာပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ၎င်း၏ပရိသတ်အစုအဝေးကိုစုဝေးစေခဲ့သည်။ လူထု CS 1.6 တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပိုပြီးကြီးမားလာပြီးလူတွေကကမ္ဘာအနှံ့ကစားနေကြတယ်
CS သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အကြီးမားဆုံးနှင့်အကစားဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဖြန့်ချိခဲ့သော်လည်းဤဂိမ်းသည် Esports တွင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်၌ကစားနေဆဲဖြစ်သည်။ သန်းပေါင်းများစွာသောလူများသည်၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများတွင် CS 1.6 ရှိနေသေးပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသောလူသစ်များသည်အင်တာနက်မှအခမဲ့ download လုပ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေလည်းကျင်းပနေပါတယ် CS 1.6 နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားများသည်ဤပွဲစဉ်များတွင်ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာကစားသမားများစွာသည်ကမ္ဘာအနှံ့နာမည်ကျော်ကြားမှုရရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည်ကစားသမားများသည်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များ၊ အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်ခြင်း၊ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီသည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုရရှိရန်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏တာ ၀ န်ကိုပြီးစီးအောင်လုပ်ရမည်။ သူတို့ကဗုံးတွေနေရာချခြင်း (သို့) ပိတ်ခြင်း (သို့) အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ဓားစာခံတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ရမယ်။ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သည်ဗုံးတစ်လုံးသယ်ဆောင်ကာနေရာတစ်နေရာတွင်နေရာချကာဂိမ်းကိုအနိုင်ရရန်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမပြုမီဗုံးများကိုလက်နက်မဲ့ကာကွယ်ခြင်းမှအကြမ်းဖက်အုပ်စုအားတိုက်ခိုက်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့သည်အကြမ်းဖက်သမားများအားတိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရရန်အတွက်ကျောက်တုံးတစ်တုံးမျှမကျန်ခဲ့ပါ။ ဓားစာခံမြေပုံများတွင်တန်ပြန်အကြမ်းဖက်သမားကဂိမ်းတွင်အနိုင်ရရန်အတွက်အကြမ်းဖက်သမားမှဖမ်းဆီးထားသည့်ဓားစာခံအုပ်စုတစ်စုကိုကယ်တင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ဓားစာခံများကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့လျှင်၊ သူတို့ကအနိုင်ရရှိပြီးအချိန်ကုန်သွားလျှင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သည်အနိုင်ရရှိသည်။
သင် ... လုပ်ပါသလား သိတယ် لما.ا CS ၁.၆ သူက အများဆုံး ةعبية ဒေါင်းလုပ် CS ဂိမ်းလား
ကူးပါ CS 1.6 Counterstrike သည်များစွာသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းသည် Counterstrike ၏ယခင်ဗားရှင်းထက်ထူးခြားပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစေသည်။ ဤဗားရှင်းကိုတီထွင်ခဲ့သည် Counter-Strike အထူးသဖြင့်ကစားသမားများ၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်အများပြည်သူအတွက်ပရိုဂရမ်မာများ Counter Strike တွင် multiplayer နှင့် single player modes နှစ်ခုလုံးရှိသည်။ developer များကနည်းဗျူဟာဒိုင်းလွှား၊ crosshair ပါသောစနိုက်ပါနှင့်နောက်ခံ update များပါ ၀ င်သောဗားရှင်းအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကစားသူများသည်ဗားရှင်းအသစ်တွင်ဓားများ၊ သေနတ်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာများ၊ လက်ပစ်ဗုံးများ၊ စက်သေနတ်များနှင့်ဗုံးရှင်းလင်းရေးပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်ကွဲပြားခြားနားသောအသစ်လက်နက်များကိုရနိုင်သည်။ CS 1.6မရ။ ကစားသမားများသည်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်း၏လိုအပ်ချက်များအတိုင်းလက်နက်များ ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်ငွေရှာနိုင်သည်။ ဤလက်နက်များသည်တကယ့်စစ်ပွဲများအတွက်သုံးသောတကယ့်လက်နက်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤလက်နက်များသည်အသံအေးပြီးကစားသမားများကိုစွဲမက်စေသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်၊CS 1.6 Doses သည်လေးလံသောကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်လေးလံသောဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်မည်သည့်ကွန်ပျူတာစနစ်ကိုမဆိုအနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောမည်သည့်ကွန်ပျူတာစနစ်မဆိုအလွယ်တကူကစားနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအပြင်၎င်းသည် Microsoft Windows ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
ထို့အပြင် Counterstrike သည်လူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ၌သူတို့၏ပြဿနာများကိုမေ့ပျောက်စေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများမှဂိမ်းလောကသို့မတူကွဲပြားသောအရာတို့ကိုပြောင်းစေသည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးကစားပါ CS 1.6 မသိသောသူငယ်ချင်းများနှင့်လူများနှင့်အတူအပျက်သဘောထားများကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်လူတို့အားဖျော်ဖြေရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဘာသာပြန်နှင့်စကားပြောဂိမ်းသည်ကစားသမားများအားဒဏ္legendaryာရီစီးပွားရေး၏အင်္ဂါရပ်များကိုခံစားရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။